प्ले स्टोरमा ४.६ रेटिंग भएको तीन पत्ती गोल्ड तासको उत्तम आनुभव दिने एन्ड्रोइड गेम हो । यो अनलाइन गेम हो र यसमा गेमरहरुले अरु अनलाइन गेमरहरुसंग खेल्नुका साथै आफ्नै प्राइभेट टेबल बनाएर आफ्नो साथीभाइलाई मात्र निम्त्याएर खेल्न सकिन्छ । यो मोबाइलमा मात्र नभइ फेसबुकबाट ल्यापटप वा कम्प्युटरमा पनि खेल्न सकिन्छ । यस गेममा अरु धेरै मोडहरु पनि छन् जस्तै हुकाम, मुफ्लिस, जोकर आदी ।
इसानी टेक्नोलोजीले विकास गरेको टाइगर ट्राप अत्यन्तै रमाईलो र क्रिएटिभ एन्ड्रोइड एप्लिकेशन हो । लोकप्रिय परम्परागत नेपाली खेल बाघचालमा आधारित टाइगर ट्रापमा १५ लेभल छन् । त्यसैगरि यसमा गोट मोड र मल्टिप्लेयर मोडहरु गरि तीन ओटा फरक मोड छन् । यस गेमका आरु फीचर भनेको बढ्दो कठिनाइसहितका विभिन्न लेभलहरु, गेमप्लेलाई सजिलो बनाउन पावर प्लेको प्रयोग आदी हुन् ।
मोर्टल कोम्ब्याट एक्स
वारनर ब्रोसद्वारा विकास गरिएको यो एक्शन गेम हो । यस गेममा अत्यन्तै राम्रो ग्राफिक्सका साथै यसमा भएको फेटालिटी भाग झनै यथार्थवादी छ । अनलाइन र अफलाइन दुबै खेल्न मिल्ने यो गेम कमजोर मुटु भएकाहरुलाई होइन र १८ं उमेर भएका लागी मात्र हो । अनलाइनमा गेमरले अरु गेमरहरुसंग चुनौती गर्न सक्छन् कि अफलाइनमा यसमा भएका स्टोरी मोडमा भएका १२ पाठ खेलेर माथि पुग्न सकिन्छ । त्यसै गरी अनलाइन खेल्दा हरेक हप्ता, अनलाइनमा गेमरको र्याँकिंगआनुसार धेरै उपहारहरु पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
ड्रीम लिगसकर २०१७
फर्स्ट टच गेमले विकास गरेको यस स्पोर्ट्स विधाको फुटबल गेम हो । यो गमे आफ्नै सशक्त फुटबल टिम बनाएर खेलिन्छ. त्यसैगरी यो गेम अनलाइन र अफलाइन दुबै मोडमा खेल्न सकिन्छ । यो गेमको ग्राफिक्स धेरै राम्रो छ र गेमरहरुको बीचमा धेरै लोकप्रिय पनि छ । स्मार्टफोनमा फुटबलको आनन्द लिन खोज्नेहरुको लागी ड्रीम लिगसकर २०१७ एक उत्क्रिस्ट गेम हो ।
डब्लूडब्लूइ २के१७ डब्लूडब्लूइको आफ्नै आधिकारिक मोबाइल रेस्लिइंग गेमको २०१७ संस्करण हो । यो गेम स्पोर्ट विधामा पर्छ र यसमा भएको हाई क्वालिटी ग्राफिक्सले गेम खेल्दा रियालिस्टिक अनुभव प्रदान गर्दछ । डब्लूडब्लूइ २ के १७ यस गेम श्रृंखलाको नवीनतम संस्करण हो ।
ब्ल्याक ल्याब्सद्वारा विकास गरिएको एभरविंग गेम २०१६ को नोभेम्बरमा फेसबुक मेसेन्जरको इन्स्ट्यान्ट गेमिंग प्लेटफार्ममा सार्वजनिक गरिएको थियो । थोरै समयमा नै यो गेम धेरै लोकप्रिय बन्न पुगेको छ. एभरविंग स्क्रा‘लिंग शूटर गेम हो । यस गेमका ३वटा मोडहरु छन् जुन हुन् सिंगल प्लेयर, बस रेडस् र क्वेस्ट । त्यसैगरी, यस गेममा गेमरले आफ्नो फेसबुक मेसेन्जरका साथीहरुलाई च्यालेन्ज गर्न सक्छन् र आफ्नो उपलब्धिहरु मेसेजमा साथीहरुलाई शेयर नि गर्न सक्छन ।
ग्रान्ड थेफट अटो सान आन्द्रेस
यस गेमको विकास रक्स्टार गेमले गरेको हो । यो एक एक्सन एडभेन्चर गेम हो । यो गेमका धेरै संस्करणहरु छन् तर ग्रान्ड थेफट अटो सान आन्द्रेस सबै भन्दा नया संस्करण हो । यो खेल्न धेरै सहज छदैछ र यसको ग्राफिक्स पनि धेरै राम्रो छ । आहिले सम्मकै सबै बन्द राम्रो गेम भनेर लेबल गरिएको यो गेम अपराध, एक्सन र फाइट मन पराउने गेमरहरुको लागी एक उपयुक्त गेम हो । त्यसैगरी, स्टोरीमा आधारीत भएर खेल्न रुचाउनेहरुको लागी पनि यो उपयुक्त गेम हो ।
आसफाल्ट ८ एयरबोर्न
आसफाल्ट रसिंग गेमको श्रृंखला हो जसलाई गेमलोफ्टले विकास गरेको हो । आसफाल्ट ८ एयरबोर्न यस श्रृंखलाको एक गेम हो र रसिंगको एड्रेनालिन मनपराउनेहरुको लागी यो एक आदर्श गेम हो । कार र मोटरसाइकल दुबैलाई रेस गर्न मिल्ने यस गेममा १९५ कारहरु उनलक र सेलेक्ट गर्ने मिल्छ भने ५ मोटरसाइकलहरु छन् । कारको बारेमा धेरै जान्न खोज्ने र कलेक्टरहरु को लागी पनि यो धेरै उपयुक्त गेम हो ।
डुडल आर्मी २
मिनी मिलिसियास् एपसोमिनियाक्स एलएलसीले सार्वजनिक गरेको यो गेम धेरै समय देखि नै युवाहरुबीच सारै नै लोकप्रिय छ । यस अनलाइन गेमले थोरै समयमा नै धेरै नाम कमाएको ठेयो र आहिले सम्म पनि यो लोकप्रिय छ । यो अनलाइन मुल्टीप्लेयर कम्ब्याट गेम हो जसमा अनलाइन खेल्दा एकैपटक ६ जना खेल्न मिल्छ भने, लोकल वाइफाइ नेटवर्कमा १२ जना सम्म खेल्न सकिन्छ । यस गेमको मुख्य रणनीति भनेको विभिन्न हतियारको प्रयोगले दुस्मनलै निस्तेज गर्नु हो । यो गेम एक्लै भन्दा साथीभाईहरु संग खेल्दा जनै रमाइलो हुने भएकोले पनि यो गेम यस्यो लोकप्रिय छ ।
क्यानडी क्रस सागा
क्यानडी क्रस पुरानै गेम हो तर यो आहिले सम्म पनि धेरै नै लोकप्रिय छ । यो गेम किंगले २०१२ मा विकास गरेको थियो । यो गेम आहिले सम्मपनि एती लोकप्रिय हुनु को मुख्य कारण भनेको यसको राम्रो गग्राफिक्स र यसमा भएका आनगीन्ति लेभलहरु हुन । साथै लेभल साथै बढ्ने यसको कठिनाईले यो गेम झनै रमाइलो बनाउछ ।
इन्स्टग्राममा लोकप्रिय ह्रयासट्गहरु #love र #selfie हुन्, के छन् अन्य रोचक तथ्य, पुरा पढ्नुहोस
नेपाल दोस्रो स्लो इन्टरनेट कनेक्टिभिटी स्पीड भएको देश